Ukuphupha kwesulfure Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Isalfure yinto yemichiza enokufumaneka kwitafile yamaxesha aphantsi kwesimboli "S" yesalfure. Umbala wesalfure utyheli kwaye awuzinzanga.
Isalfure isetyenziswe ngabantu ixesha elide. Umzekelo, amaTshayina asebenzise le nto malunga ne-5000 BC njengearhente yokufaka umbala kwilaphu. Kodwa isalfure yayikwasetyenziswa njengeyeza okanye ukubulala iintsholongwane.
Namhlanje, uninzi lwesalfure ekhutshwe kwimithombo esisiseko isetyenziswa kwimizi-mveliso yamachiza. Apho isetyenziselwa ukuvelisa i-acid ye-sulfuric, ethathwa njengenye yezona khemikhali zibaluleke kakhulu.
1 Uphawu lwephupha «isalfure» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «isalfure» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «isalfure» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «isalfure» - ukutolikwa ngokubanzi
Ngokwenkcazo ngokubanzi yamaphupha, umbono wesalfure ephupheni ubhekisa ikakhulu kwi kugulaLe nto izakwenzeka okanye sele ikhona kodwa ayikaziwa. Kwakhona, umxholo wephupha onjalo unokufuna ukugcinwa kwemfihlo kwimicimbi yeshishini, kuba kungenjalo umntu uya kufuna ukukukhathaza.
Ngamanye amaxesha, uphawu lwephupha "isalfure" lisenokubonisa ukuba umntu uya kuphulukana nabahlobo ukuba uyaqhubeka nokubambelela kwizenzo ezingenampawu kwaye akazilungisi iimpazamo zakhe. Ukutsha kwesalfure ephupheni kungakhokelela kokungakumbi ngqalelo khuthaza kwimicimbi yobutyebi.
Ukuba isalfure itsha ngokukhawuleza, oku kunokuqondwa njengophawu lwemfuno kunye nenkxalabo, kunye nobunkokeli. Ukuba utshaya into enesalfure xa ulele, kufanele ukuba ibekhona el mundo ukuvuka ekhaya. ulungelelwano yenza kwaye ujongane nesiphithiphithi sakho.
Ukutya isalfure njengemeko yamaphupha kuzisa ulonwabo kunye nempilo entle. Ngendlela yomgubo, isalfure inokusetyenziswa njengomfanekiso wephupha njengophawu lwento elungileyo. Imeko yezempilo Makuqwalaselwe. Amakristale eSalfure, kwelinye icala, akhomba kuphuhliso olulungileyo lokuvuka kobomi. Isulphur raisins inokuba sisilumkiso ngokuchasene nokungakhathali okugqithisileyo ngexesha lokulala.
Uphawu lwephupha «isalfure» - ukutolikwa kwengqondo
Ukutolikwa kwengqondo ephupheni ubona kwisimboli yephupha "isalfure" isicelo xa uphupha. Ufanele ngokwenene uphile ubomi bakho lungiselela. Oku kubandakanya ukwakhiwa kwengqondo, apho kuya kufuneka uzikhulule kwiimpawu ezithile. Ngamanye amaxesha, isalfure yento nayo inokubangela ukugula.
Ukuba uqhuba uvavanyo lwesulfure kwilabhoratri ephupheni lakho, ukwilizwe lokuvuka. Iimvakalelo osiphelo asikhe usibone kwangaphambili. Ukujonga ulingo lwesalfure ephupheni, kwelinye icala, kunokubonisa umgama weemvakalelo kulowo uphuphayo. Usalinde into ebomini bakho.
Uphawu lwephupha «isalfure» - ukutolika kokomoya
Ngaphakathi kuhlalutyo lwamaphupha okomoya, isimboli yephupha "isalfure" ibandakanya inqanaba eliphezulu lengcaciso. Umphuphi uzifumana ngephupha lakhe. ukululekaukuxhomekeka kwicala elinomdla okanye eliqhutywa sisizathu sobuntu. Isigqibo sixhomekeke kwimeko yokuphila.